ikhabhinethi Network - China Chao Yu Machinery
Vula ntsimbi zilapha phezulu Frame
Kuya kukhethwa iiphaneli
enye into eyongezwayo
Kwikhabhinethi Network, nesetyenziswa ukudibanisa kwiqela lenjongo obandayo, i plug-in, ibhokisi plug-in, eli licandelo lektronikhi, isixhobo kunye namalungu loomatshini amacandelo, ukuze ulibhangise ibhokisi ufakelo. Ngokutsho uhlobo lwangoku, kwikhabhinethi umncedisi, udonga kwikhabhinethi, uthungelwano kwikhabhinethi, kwikhabhinethi eqhelekileyo, okrelekrele uhlobo ucango kwiKhabhinethi yangaphandle njalo njalo. Amaxabiso Capacity aphakathi 42U ne 2U.
isakhiwo Simple, intsebenziswano elula, umsebenzi ngokugqibeleleyo, ubungakanani ngqo, iyenoqoqosho bobuqili;
- ngamazwe ethandwa iglasi yaphazamiseka emhlophe emnyango;
Le isakhelo ephezulu ezinemingxuma umoya setyhula;
Kwangaxeshanye, ukufaka ivili kunye iinyawo axhasayo;
Kwaye zezikhali ngokufanele jikelele emnyango kunye nomnyango nangasemva;
- ukugqiba nezincedisi ozikhethelayo.
cabinet womnatha ubunjwe asikiweyo cover (ucango), leyo ngokubanzi imilo buxande, kwaye ibekwe emgangathweni. Inika indawo efanelekileyo kunye nokhuseleko ukuze ukusebenza eqhelekileyo izixhobo ze-elektroniki. Oku kuphela emva kwendibano kwinqanaba nkqubo. Le eKhabhinethi ayinayo isakhiwo evaliweyo kuthiwa isakhelo.
womnatha Early cabinet ikakhulu kokugxeka okanye engile ngokusebenzisa esijijwayo, rivet eqhagamshelwe okanye nge welding kwisakhelo yeKhabhinethi, kwaye yenziwe inshorensi ipleyiti yesinyithi obhityileyo (ucango) kunye. Olu hlobo kwikhabhinethi yikulu, enkulu, ezilula, sisusiwe. Kunye nokusetyenziswa transistors, iziphaluka ezihlangeneyo kunye namacandelo ahlukeneyo, izixhobo ze-compact ultra, isakhiwo yikhabhinethi kwakhona amancinci, ukwakha iibloko kwicala lophuhliso. Le cabinet womnatha iye yaba uthotho kwiplagi kunye iziseko kunye nobukhulu ethile. Faka ibhokisi, plug-in kwilungiselelo kwindibano lwamalungiselelo othe tye kunye nkqo yeendidi ezimbini. Le nkcazelo womnatha kwikhabhinethi ngokubanzi isebenzisa imbasa ngentsimbi, uhlobo ngalunye steel icandelo imilo, iprofayili aluminiyamu kunye zeplastiki zobunjineli ezahlukeneyo, njl .. In
ixesha Post: Jan-17-2018
NO.268 Danyang Road, Xiangshan Economic Development Zone, Ningbo City, Zhejiang kwiPhondo, China
Tsalela ngoku: +86 0574 65003787